Mugovera, Kukadzi 5, 2011 Douglas Karr
Nguva nenguva, isu tine tarisiro yekuuya kwatiri uye kutikumbira kuti tiise pamwechete purojekiti yekota pane yekutsvaga injini optimization. Vazhinji, yekutsvaga injini yekugadzirisa haisi chirongwa. Haisi kuedza kwaunogona kupedzisa nekuti uri kurwisa chinongedzo chinofamba. Zvese zvinhu zvinoshanduka nekutsvaga:
Tsvaga injini dzinogadzirisa algorithms avo - Google iri kugara ichigadzirisa kuti irambe iri pamberi pe spammers uye, nguva pfupi yadarika, zvirimo mapurazi. Kunzwisisa maitiro ekuburitsa zvirimo zvako kana shanduko idzi dzaitika zvinogona kugadzirisa mhedzisiro yako. Kwete kugadzirisa kunogona kuita kuti saiti yako ivigwe. Izvo hazviite zvakanyanya, asi isu tinoona shanduko dzichiitika nevatengi vedu.
Vanokwikwidza vako vari kugadzirisa avo enjini yekutsvaga - Makwikwi ako ari kuita shanduko kumasayiti avo uye pamwe ane mamwe makuru ma SEO ma consultants achivabatsira iwo zvakare. Kana iwe uchinge wakamira zvine mutsindo uye uchiita kudzoka kukuru mukudyara, ingori nyaya yenguva makwikwi ako asati atanga kuisa mari muzano.
Maitiro ekambani yako, zvigadzirwa uye masevhisi anochinja - Iyo kambani yako inozvisiyanisa pachayo kubva kumakwikwi kazhinji inoshanduka nekufamba kwenguva sezvaunokura, uchidzikira kana kugadzira zvigadzirwa zvitsva, zvigadzirwa nemasevhisi. Kutsvaga kwako kwekutsvaga kunofanirwa kutevedzera izvi.
Shanduro yekushandisa shanduko - Dzimwe nguva, mazwi anozotsvaga nevashandisi anochinjawo nekufamba kwenguva. Semuenzaniso, kunyoresa, chikwiriro, uye Software vese vane akasiyana mavhoriyamu ekutsvaga muindasitiri yehunyanzvi. Kunyangwe hazvo ivo vese vangangoshandiswa zvakafanana, mashandisiro avo akachinja mukuzivikanwa nekufamba kwenguva.
Tsvaga mavhoriyamu shanduko - Nguva yezuva, zuva revhiki, shanduko yemwedzi uye yemwaka zvinogona kukanganisa kutsvaga. Meseji yako uye zvemukati zvinogona kuda kuchinjika kuti zviwanikwe.
Platform matekinoroji anochinja - Isu takaona mamwe mawebhusaiti akanaka akanyatso kutsakatika kubva pamhedzisiro yekutsvaga kubvira kwavo CMS haina kugadziridzwa kana kutaurirana neinjini dzekutsvaga. Kana iwe uine CMS yekare isina kuvandudzwa, pamwe uri kurasikirwa nekwaniso yekuwedzera injini yekutsvaga.
Nzvimbo dzakakodzera dzinochinja - Iyo yaimbove saiti inozivikanwa kwazvo muindasitiri yako inogona kunge isisave… saiti masimba anochinja nguva dzese. Kuona kuti yako saiti inosimudzirwa pane epamusoro saiti ichaenderera nekuwedzera kufarirwa kwenzvimbo yako uye chinzvimbo.
Kuva nemubatsiri kana kuenderera kunyoreswa neakakura SEO mupi kunopa yako kambani nekudzoka kwakanaka pane investment kana iyo yekutsvaga yekuda iripo. Kana kambani yako iine zviwanikwa zvemukati kuti zvishande nekutsvaga, kunyorera ku SEOmoz or gShiftLabs pamwe nemamwe maturusi ekuongorora akakodzera kudyara.
Kana vatengi vedu vakwanisa kuenderera pamwe neshanduko idzi, isu tichiramba tichiona kudzoka kwekuwedzera kwekudyara, mutengo wavo mutobvu unoramba uchidonha, uye ivo vanokwanisa kuwedzera zvizere kutsvaga kutsva kwevatengi kutsva. Zvinoda kuenderera mberi zvichiongororwa uye kugadzirisa, zvakadaro. Kana kambani yako iri kukumbirwa neiyo SEO femu iyo ine yakajairwa purojisheni uko ivo vanozokwenenzesa saiti yako pamutengo wakatemwa uye woenda kure, ungangoda kufungisisa kudyara.
Tags: mhedzisiro yebhizinesicokemutengi ongorora vhidhiyo
Kukadzi 5, 2011 na11:02 PM
Kukadzi 5, 2011 na11:47 PM
Mar 2, 2011 pa 11: 14 AM
Jun 24, 2013 pa 10: 40 PM
Jun 26, 2013 pa 9: 27 PM